ထိရောက်စွာတလွဲအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါရန်အဆိုပါ Key ကိုအမှတ်သခင်အဆိုပါဂိုဒေါင်သိုလှောင်ကေ့ကိုသုံးပါ - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသတ္တုသိုလှောင်ပစ္စည်းသတ္တုကွန်တိန်နာ,ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း,Pallet,ထိန်သိမ်း,roll ကွန်တိန်နာ etc
နေအိမ် » ထိရောက်စွာတလွဲအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါရန်အဆိုပါ Key ကိုအမှတ်သခင်အဆိုပါဂိုဒေါင်သိုလှောင်ကေ့ကိုသုံးပါ
ထိရောက်စွာတလွဲအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါရန်အဆိုပါ Key ကိုအမှတ်သခင်အဆိုပါဂိုဒေါင်သိုလှောင်ကေ့ကိုသုံးပါ
ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်. We have extensive business experience. ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျေနပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည် သတ္တုလှောင်အိမ်သိုလှောင်မှု,metal storage locker , metal cage storage units.ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
2.the overall is basically high-line channel steel, the material of the high-line determines the overall use strength of the warehouse storage cage, generally requires manufacturers to provide high-line material reports, the high-speed steel plant high line is generally better than the small steel The material of the plant is good, andalarge part of the storage cage is placed on the channel steel. ထို့ကြောင့်, the thickness of the channel steel determines whether the storage capacity of the storage cage can reach the standard.
post ကိုအချိန်: 2019-08-15